🪁 Dabeecadda & Nolosha Dibadda | Booqo Hultsfred
Dibedda ahaantaadu waa gudaha!
Weligeed gudaha uma dhicin in bannaanka la joogo. Maxaad uga faa'iidaysan weyday fursadda inaad joogitaankaaga dibadda ka dhigto mid tacabur ah! Ku bood dabeecadda aan la taaban, hoos u garaac Dackestupet, kalluun sida xirfadlaha ama ku raaxayso xasilloonida iyo xasilloonida. Halkan waa dabeecadda & nolosha bannaanka qof walba!
Dabeecadda iyo kaarka kalluumeysiga Stora Hammarsjöområdet
Galbeedka Hultsfred kaliya waxaa ku yaalo deegaanka Dabeecadda iyo Gaaban ee Stora Hammarsjöområdet. Aaggu waa ilbaxnimo dhammaan dadka kalluumeysatada ah. Waxaa sidoo kale jira xayawaan xiiso leh iyo dhir.
Ugaarsiga Jernudden iyo waaya-aragnimada dabeecadda. Iyada oo ay weheliyaan shirkadaha maxalliga ah, Jernudden waxay bixisaa xirmooyin kala duwan oo ay ku jiraan ugaadhsiga, khibradaha, hoyga iyo cuntada. Tusaalooyinka baakadaha buck ugaarsiga qalabka ugaarsiga la
More kastell waa doox ku yaala Småland oo ku yaala xadka u dhaxeeya degmooyinka Hultsfred iyo Högsby. Halkan Småland ee Grand Canyon jeexyada waaweyn ee leh khaanadaha dhagaxyada
Hammarsjön sauna & tubbada kulul waxay ku taal agagaarka Stora Hammarsjö, haddii aad rabto inaad la kulanto wax gaar ah, waa inaad tijaabisaa saunada Hammarsjön iyo tuubada kulul. Halkan waa alwaax gubanaya